Guqula amadigri / imizuzu / imizuzwana ibe ngamadesimali - amaGeofumadas
Guqula degrees / imizuzu / imizuzwana idesimali
NgoFebhuwari, 2010 Cartografia, Ukulanda, -Google Earth / Amamephu
Esikhathini esithile esidlule ngiye ngicela lokhu, futhi njengoba umngane ubonakala efana kancane esheshayo futhi ukuthi namuhla usuku lokugubha izinto eziningi, nansi ithuluzi elikuvumela ukuthi uguqule izixhumanisi zendawo, ama-degrees abe yiziqu.
Kungani kutheni ukuguqulwa kwetafula
Kuvamile ukuthola izixhumanisi ezise-degree, imizuzu, imizuzwana, isibonelo:
I-N isho ukuthi ingububanzi obungama-degree angama-75 ngaphezu kwe-equator, uma yayino-S kwakuzosho ukuthi isenkabazwe eseningizimu. Endabeni yobude obude, bazoba no-E noma u-W, kuya ngokuthi basempumalanga noma entshonalanga ye-meridian yeGreenwich
Izinhlelo ezifana neGoogle Earth ne-ArcGIS zidinga ukuthi zihambe ngefomethi yedesimali, njenge:
I-Latitude, ukube ibingaphansi kwe-equator, ibingaba yinegethifu, futhi okufanayo kuzokwenzeka ngobude, obekungaba kubi ngenkabazwe yasentshonalanga. Ngincoma ukuyiqonda, ngidlale kancane ngeGoogle Earth, ngishintshe izinketho zokubonisa ze-UTM, ezindawo, ngaphandle nangaphandle kwezindawo zamadesimali.
Indlela ithebula lisebenza ngayo ukuguqula izixhumanisi zendawo, amadigri kuya ekugcineni
njalo besebenzisa ithebula Gabriel Ortiz, ngubani wazinza yokuguqula kwendawo ukuze UTM, ukubonisa ikholomu bakuphi ngefomethi ledesimali.
Ungakhetha i-spheroid, kuthebhu engenhla.
Amakholomu aphuzi, kufanele afake idatha, kukholomu yokuqala yamukela inombolo ekhomba iphuzu.
Ngakwesokunene ngasinye yi-latitude nobude efomini lesidangala, ngaphandle kokuqhafaza, ne-symbol yayo engafanele uma ihambisana.
Ikholomu ye-orange iqukethe idatha ekhonjisiwe, nenombolo yephuzu, ubude nobude.
Konhlokweni wale kholamu, ungafaka inani lezindawo zamadesimali esilindele ukuthi i-concatenation izungeze. Qaphela ukuthi ama-decimals wokuqoqa ukuxhumanisa kwendawo angaholela emaphutheni amakhulu.
Thumela izixhumanisi ku-txt
Ukuze ubathumele efayeleni le-txt, vula ifayela elisha, ukopishe idatha kusuka kukholomu ye-orange bese ubinamathisela khona.
Khona-ke leli fayela lingalayishwa kusuka ku-Google Earth, ekhombisa umyalo, njengokuthi Ngichaze kulokhu okuthunyelwe.
Vele, iDatum kufanele ibe ku-WGS84 ukuze ingawi kwenye indawo. Amakholomu abelokhu eguqulela ku-UTM futhi evumelana ne-AutoCAD, njengoba yayinjalo inguqulo yokuqala kule tafula.
Ukulanda kudinga umnikelo ongokomfanekiso wokulanda, ongakwenza nge-PayPal noma ekhadini lesikweletu.
Amakhuphoni Google Earth IHhovisi ebulalayo
Thumela Previous«Langaphambilini Iminyaka eyi-120 yeNational Geographics
Post Next Baphi abasebenzisi abaningi be-GIS?Okulandelayo »
Izimpendulo ze-20 "Guqula amadigri / imizuzu / imizuzwana ibe ngamadesimali"
NgoSeptemba, i-2012 ku
efanayo nami: p
Ibanga ngalinye linemizuzu engama-60 futhi njalo ngemizuzwana engama-60. Kwenzekani ukuthi ngesikhathi sokubamaka ebalazweni noma esikhaleni, benziwa kuphela kuwo wonke amabanga athile ukuze bangagcwali igridi.
Sawubona, uphakamisani? Ngididekile kancane naleso degrees, imizuzu namasekhondi ukuthi geography Kusolwa ukuthi ngaleyo ndlela ngamunye Meridian elinganisiwe 15 degrees kanye degree ngamunye kulinganiswa imizuzu 4, kungenzeka kanjani-ke ukuthi 1 60 degree isilinganiso imizuzu? noma ilinganisa i-4 noma izinyathelo ze-60, kanjani lokho? Ngifisa sengathi othile angiphendula
I-degree ineminye imizuzu ye-60, kodwa kulokhu awunayo imizuzu.
Kepha futhi ibanga ngalinye linemizuzwana engama-3,600 (imizuzu engama-60 ngemizuzwana engama-60). Ngakho amasekhondi akho ayi-15 alingana:
Lapho-ke kuzoba ngama-75.004166 degrees ngefomethi yedatha.
Ake sibeke esinye isibonelo esibandakanya amadigri, imizuzu nemizuzwana:
Imizuzwana: 57 / 3600, elingana nama-0.0158333 degrees.
Ukwengezwa kuzoba yizicathulo ze-75.249166.
kahle, akukho engikudingayo ukwazi ukuthi ungadlulisa kanjani u-75 ° 15 ″ ukukala ,, okungukuthi, ukuya kudesimali ,, ngicela usize
Umqondo ongenalutho lo msebenzi (amazinga aDesimenti kuya kumadigri, imizuzu nemizuzwana) kulesi sihloko.
Ngo-Ephreli, i-2012 ku
Siyabonga ngemininingwane, qiniseka ukuthi othile angayisebenzisa.
Nganquma ukuthumela ikhodi:
Umsebenzi we-GMS (DegreesDecimal)
g = Int (az): m = Int ((az - g) * 60): s = Round (3600 * (az - g - m / 60), 0): If s> = 60 Bese s = 0: m = m + 1
Uma m> = 60 Bese m = 0: g = g + 1
Uma g> = 360 Bese g = 0
Thumela e-mail editor@geofumadas.com
futhi ngemva kokubukeza sizosakaza.
Ngenze i-Excel engenayo okusebenza kwayo ukuguqula i-angeli. Amadijithali angama-decimal abe ngombhalo wesigatshana sesibili
3.15218 = 3 ° 09'7.85 ″, kepha angazi ukuthi ngiyilayisha kanjani esithangamini. Umuntu angisize ngicela.
Ngifuna itafula ukuguqula i-UTM PSAD56 kumaDegrees, imizuzu yedesimali
Okthoba, i-2010 ku
Numa ngiyabonga kakhulu ngenxa ye-sabia nada kodwa i-graxiias
ngiyabonga kakhulu! Awazi ukuthi ngilahlekile kanjani ukuthi nginguHahahaha, sibingelelo !!!!!!!!!
Isiqu se-1 sinemizuzu engu-60, umzuzu owodwa we-60 imizuzwana.
Hlukanisa i-4,750 phakathi kwe-60 ukuze wazi ukuthi zingaki ama-degree, okunikeza i-79.16
Khona-ke, wena bengitawu 1 degree (ngamaminithi 60) kodwa kokubili engeza 19 79 imizuzu degrees.
Uma sihlanganisa ukuthi mangaki amasekhondi anemizuzu engu-79 evaliwe, sizoba no-79 × 60 = 4,740. Okusho ukuthi usenamasekhondi ayi-10 asele ukufika ku-4,750
I-1 degree, imizuzu ye-19, imizuzwana engu-10
Ngidinga ukujabulisa ngitshele okulandelayo okufanele ngikulandele ukuveza ngamadigri, imizuzu nemizuzwana: imizuzwana engu-4750. Anginayo into encane kakhulu
Kwangathi, i-2010 ku
Ingulube ingabeki i-piggy pure ekhonza izinto
Epa! Isixhumanisi esihle kanjani. Ngiyabonga, kuningi ongakubona lapho.
Ungasebenzisa «Guqula ifayela le-GPS ukucacisa umbhalo noma i-GPX» kuwebhusayithi http://www.gpsvisualizer.com futhi uguqula amaphuzu efayeleni le-GPX bese ulilayisha ku-GE noma ku-Global Mapper futhi ukusuka lapho kuya kufomethi oyidingayo.
Ukubingelela kusuka e-Argentina futhi nsuku zonke engibukeza ibhulogi kuyathakazelisa kakhulu.